Ciyaaraha Barwaaqa Sooranka oo furmaya - BBC Somali
Ciyaaraha Barwaaqa Sooranka oo furmaya
Image caption Boqorada Britain, Elizabeth II
Waxaa maanta si rasmi ah ay boqorada UK u fureysaa ciyaaraha barwaaqa sooranka, oo 11 maalmood ka socon doona magaalada Glasgow ee magaalooyin kale oo ka tirsan Scotland.
Boqorada ayaa furitaanka ciyaaraha ka jeedin doonta khudbad.
Ciyaaraha barwaaqa sooranka ayaa markii ugu horreysay sanadkii 1930-kii lagu qabtay dalka Canada, waxaana xilligaasi ka qeyb galay 11 kooxaad iyo 400 oo ciyaartooy ah.
Markii ugu dambeysay ee ciyaaraha barwaaqa sooranka lagu qabtay Scotland sanadkii 1986-dii, waxaa qaadacay 32 dal kuwaas oo diidanaa taageeradii ay dowladdii Britain ee xilligaasi siineysay nidaamkii midab takoorka ku salaysnaa ee Koonfur Afrika ka jiray.
Sanadkan waxaa ciyaaraha ka qeyb galaya 71 dal iyo deegaanno, kuwaas oo ku tartamaya 17 ah noocyada kala duwan ee ciyaaraha.
Magacyada ugu waaweyn ee tartankan ka qeyb galaya ayaa waxaa ka mid ah oradyahanka caanka ah ee Jamaica u dhashay ee Usain Bolt, ninka haysta rikoorka orodka 800M una dhashay Kenya, David Rudisha, ninka dabbaasha caanka ku ah una dhashay Koonfur Afrika, Chad le Clos.
Ciyaarahan ayaa la filayaa in ay dad ay tiradoodu gaareysa hal bilyan oo ka daawan doonaan telefishinada caalamka.